March 1, 2018 – PuraKhabar
देशमा चौतर्फी रुपमा समृद्धि दिन्छौँः दाहाल
March 1, 2018 पुराखबर
नवलपरासी : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले सुशासन, स्थायित्व, विकास र समृद्धि अबको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर नेपालले संयुक्त रुपमा नवलपरासी ( बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) को बर्दघाटमा आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो,“अब सबै मिलेर देशमा चौतर्फी रुपमा समृद्धि दिन्छौँ, देशमा विकासको आवश्यकता छ, तराई मधेशमा अझ बढी विकास गर्नु बाँकी छ ।” संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई समेत सरकारमा सहभागिता गराउन वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी उहाँले. दिनुभयो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता अन्तिम चरणमा पुगेको…
संसारका यी हुन पाँच धनाढ्य अभिनेताहरू, जस्को सम्पति सुन्दै अचम्म लाग्छ !
सेलिब्रेटीहरू उसैपनि आरामदायी जीवन चाहन्छन् भन्ने कुरा हाम्रा लागि नौलो होइन, तर उनीहरुले आफ्नो इच्छा कसरी पूरा गर्छन् भन्ने कुरा चाँही हामीलाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । सेलिब्रेटीहरूको कमाई कलाकारिताबाट मात्रै हुँदैन्। कलाकारितासँगै उनीहरुले कुनै न कुनै व्यवसाय अंगालेका हुन्छन् । जसले गर्दा उनीहरुको आरामदायी जीवनयापनका लागि सहज हुन्छ । उनीहरु चर्चामा त हुन्छन् नै धनाढ्यको सूचीमा पनि पर्न सक्छन् । पर्दामा जस्ताेसुकै भूमिकामा देखिने कलाकारकाे पनि वास्तविक जीवन हामी कल्पना गर्न सक्दैनाै । अारामदायी जीवन विताउने सेलब्रेतीसँग अकुत सम्पत्ति कहाँबाट आउछ होला भन्ने धेरैको चासोको विषय हुनसक्छ । यस्तै धनाढ्य…
रंग कहाँ लगाउदै ? कसरि सजक रहने होलीमा ?
तस्बिर: कृपा श्रेष्ठ, मोडल: दिनेश शाही/उरुषा पाण्डे (नागरिक न्युज) होलीको माहोल थियो । ठमेलको काठमाडौं गेस्ट हाउस नजिकै दुई जना विदेशी पर्यटक रमाइलो मान्दै रिक्सामा आइरहेका थिए । दुवैको शरीर होलीको रङले छपक्कै रंंगिएको थियो । केही पर पुगेपछि होली मनाउँदै हिँडेको एक समूह उनीहरु नजिकै आए । रङ छ्याप्दा त उनीहरु रमाएकै थिए । ह्याप्पी होली…भन्दै खुसी साटिरहेका थिए तर उनीहरुको खुसीको समय छोटियो । रङको साटो पानी छ्याप्न सुरु भयो । दुवै एक अर्कालाई जोगाउनतिर लागे । पछाडि बसेकी महिला केही डराइन् । अगाडि बसेकी युवती साथीलाई जोगाउन…
जव साउदी महिलाले एक पुरुषलाइ हावामा उडेर फ्लाईंग किक ठोकिन (भिडियो)
﻿ हिजोआज साउदी अरबमा एउटा भिडियो भाइरल भैरहेको छ, जसमा एक घुम्टो ओढेको महिलाले एक पुरुषलाइ कुनै फिल्म दृश्य जस्तै गरि किक हान्दै छिन ! भिडियोमा कुटाइखाने पुरुष जेद्दाको अबु जैद होटलमा काम गर्ने शेफ रहेको खुलेको छ ! पहिले त भिडियोमा पुरै कालो कपडा लगाएकी महिलाले उक्त पुरुषलाई आफु नजिक बोलाउछिन ! आफु नजिक आइसको पुरुषलाइ कुनै चेतावनी नदिएरै सुरुमा उनले चप्पल मिलाउछिन जुन अरबी संस्कृति ठुलै अपमानजनक व्यवहार मानिन्छ ! उक्त पुरुषले आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ! महिला त्यो कडा किक ले गर्दा भिडियोमा देखिएको…
सबै विद्यार्थीले ‘निःशुल्क’ पढ्न पाउने गरी कानून बनाउँदै सरकार
काठमाडौँ, १७ फागुन– नेपालको संविधानको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले शिक्षासम्बन्धी दुई नयाँ कानुनको तर्जुमा शुरु गरेको छ । विसं २०२८ मा बनेको शिक्षा ऐन पटक पटक संशोधन हुँदै शैक्षिक व्यवस्थापन गरिएका सन्दर्भमा त्यसलाई विस्थापन गर्न नेपालको संविधानानुकूल नयाँ संघीय शिक्षा ऐन र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा हुनुपर्ने संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न शिक्षा अधिकारसम्बन्धी अलग्गै कानुन बन्ने भएको हो । गत वर्ष सरकारले विद्यमान शिक्षा ऐनमा नवौँ संशोधन गर्दा नयाँ शिक्षा ऐन ल्याइने प्रतिबद्धता गरेको थियो । प्रादेशिक संसद् र सरकार बनिसकेका सन्दर्भमा संघीय शिक्षा ऐनको आवश्यकता महसुुस गरी मस्यौदा…
अर्चना पनेरुको भिडियो सार्वजनिक lअहिले सम्मकै अस्लिल भिडियो
काठमाडौँ । पोर्न स्टार बन्ने भनेर चर्चामा आएकी अर्चना पनेरुको ‘हट एवं उत्तेजक भिडियो’ सार्वजनिक भएको छ । काठमाडौमा रात्रीकालिन व्यवसाय गर्ने पनेरुले केहीदिन अघि आफूले अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गरेको बताएकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू विवाह बन्धनमा बाँधिएको बताएकी उनले विवाहको तस्विर पनि सार्वजनिक गरेकी छन् । विवाहको पहिरनसहितको फोटो सार्वजनिक गर्दै फेसबुकमा उनले लेखेकी छन, ‘गट म्यारिड, लक्की टु गट अ लाइफ पार्टनर लाइक यु ।’ पोर्नस्टार बन्ने चाहने अर्चनालाई उनकी आमाले समेत साथ दिएकी थिइन् । पोर्नस्टार बन्ने भन्दै नग्न तस्विर सार्वजनिक गरेपछि विद्यालयबाट निष्कासन परेकी अर्चना…
संसदीय दलको नेता चयन सर्वसम्मतिमै गर्नु पर्ने : नेपाली काँग्रेस |
काठमााडौं । पार्टी संसदीय दलको नेता सर्वसम्मतिमै चयन गर्नुपर्नेमा नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले जोड दिएका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले संसदीय दलको नेताका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी भइरहँदा पार्टीका नेताहरुले सर्वसम्मतिमै दलका नेता चयन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएका हुन् । काँग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानले देश, जनता र पार्टीको हितका लागि पनि संसदीय दलको नेता चयनका लागि निर्वाचनमा जान उपयुक्त नहुने तर्क गरे । उनले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सन्देश दिन पनि नेताहरुले दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताए ।नेता मोहम्मद अफताब आलमले संसदीय दलको नेता सर्वसम्मतिमै चयन…
कुम्भ र मीन राशि हुनेले जान्न्नै पर्ने केहि कुराहरु ,नत्र जीवनमा धेरै पछुताउनु पर्ने छ !
राशिको स्वभावका आधारमा सम्बन्ध, दोस्ती, प्रेम प्रसङ्ग पनि निर्भर हुन्छ । कतिपयलाई त कोतुहुल्ता होला कुन राशिसंग बिबाह गर्दा राम्रो होला भन्ने कुरा । तपाईको राशिले निर्धारण गर्छ कस्तो साथी पाउनुहुन्छ । कुम्भ राशि कुम्भ राशि भएका मानिसका लागि मिथुन, तुला या कुम्भ राशिका साथी उत्तम मानिन्छ । यिनीहरूका बीचको प्रेम सम्बन्ध राम्रो हुन्छ । यदी कुनै व्यक्तिको राशि कुम्भ हो भने मेष, सिंह या धनु राशिका साथी छनौट गरे यी साथीको जोडी सामान्य रहने छ । जुन मानिसको राशि कुम्भ हो उनको लागि कर्कट वृश्चिक या मीन राशिका व्यक्तिका…
संघीय संसद् पहिलो बैठकको कार्यसूची तयार !
संघीय संसद् २१ फागुनमा बस्ने पहिलो बैठकको कार्यसूची पारित भएको छ । संसद् सचिवालयले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलहरूको बैठक राखेर कार्यसूची पारितगरेको हो । कार्यसूचीमा पहिलो दिनमै बैठक सञ्चालन गर्न अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्ने सूची राखिएको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राष्ट्रिय दल एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेतासँगको बैठकले अन्तरिम कार्यविधि पारित गर्ने सहमति जुटेको हो । पहिलो बैठकको कार्यसूची बनाउने र त्यसपछिका बैठकको तयारीबारे सहमति भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए । संसद् नियमावली तयार नहुन्जेलसम्मका…
खराब मान्छेको आँखा नलागोस् भन्नका लागि यसरी कागती झुण्ड्याउने गरेको र अन्धविश्वास भनेर टार्न त सकिएला तर यसको बैज्ञानिक कारण पनि छ ।वास्तुदोष हटाउनका लागि कागती र खुर्सानी घरमा लगाउन प्रेरित गरिन्छ । हुन पनि घरमा कागतीको रुख भयो भने वातावरण स्वच्छ र सकारात्मक ऊर्जायुक्त हुन्छ र तपाई बस्ने वरिपरिको बाताबरण स्वच्छ बनाउँदछ । सबैले घरमा रुख रोप्न नसक्ने भएकाले कागती र खुर्सानीको एक सेटले काम चलाउँछन् । कागतीमा धागो उन्दा कागतीबाट सुगन्ध निस्कन्छ र वातावरणमा फैलिन्छ ।यसले मूड पनि फ्रेश गराउँछ र हाम्रा घर वरिपरि भएका किराहरु भगाउँदछ ।…